Izindaba - 126th Canton Fair
Ngo-Okthoba 15, njengenye yezinhlaka ezibaluleke kakhulu zokukhuthaza ukuhweba kwamabhizinisi amaShayina ukunweba imakethe yomhlaba wonke, iCanton Fair eGuangzhou igxile ekuqhakambiseni izinto ezintsha eziqhutshwa, futhi "umkhiqizo ozimele" waba yigama elinemvamisa ephezulu yeCanton Fair.
UXu Bing, okhulumela i-Canton Fair nephini lomqondisi we-China Foreign Trade Center, uthe imvelo yasekhaya neyangaphandle ebhekene nokuthuthuka kwezohwebo lwangaphandle lwase China kulo nyaka iyinkimbinkimbi futhi ayiqinisekile. Iningi labakhombisi lisheshise ukwenziwa ngcono kwekhwalithi kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha, futhi laqhubeka lenza imizamo ocwaningweni lobuchwepheshe nasekuthuthukisweni, ukusungulwa komkhiqizo, ukutshalwa komkhiqizo, njll., Ngobuchwepheshe obuphezulu, ikhwalithi ephezulu, inani elengeziwe eliphakeme kanye nemikhiqizo yomkhiqizo ezimele evelayo.
Imikhiqizo eminingi ezimele emisha ye-R & D yamukelwa imakethe. Ngasikhathi sinye, abathengi abazweli kakhulu entweni futhi banaka kakhulu ubuchwepheshe, uphawu, ikhwalithi kanye nokuhlinzekwa kwemikhiqizo.
Kulo mbukiso, imikhiqizo ye-sorotec ihehe amakhasimende amaningi futhi yatuswa kakhulu. Ikakhulukazi uRevo II. I-Revo II iyi-inverter ye-hybrid pure sine wave elanga. Isikrini sayo esithile sokuthinta senza kube lula ukusebenza. Ingafana nama-PC angama-9. Amandla amakhulu ngu-49.5KW. It has izindlela ezine zokusebenza. Ikakhulukazi kwimodi yokusebenza ye- "Solar + AC", ama-solar nama-AC mains angashaja ibhethri futhi anike amandla imithwalo ndawonye. Ukusetshenziswa okuphezulu kwamandla elanga. Ukusetshenziswa kwamandla elanga kungaphezu kwe-15% kunamanye ama-inverter elanga. Uchungechunge lweRevo lungaqala futhi lusebenze ngaphandle kwebhethri, futhi futhi lungasebenza ngebhethri le-lithium. Lo mkhiqizo unokuncintisana okuqinile okuphelele.
ISorotec ayinabo ubuchwepheshe bokucwaninga besayensi obuthuthuke kakhulu emkhakheni. Imikhiqizo inokuqukethwe okuphezulu kwegolide. Futhi iSorotec izimisele ukwamukela nokwenza izinto ezintsha. Lokhu kuye kwahlonishwa ngazwi linye ngawo wonke amakhasimende.